Awo akyi ahodwira (1-8)
12 Yehowa toaa so ka kyerɛɛ Mose sɛ: 2 “Ka kyerɛ Israelfo sɛ, ‘Sɛ ɔbea nyinsɛn* na ɔwo ɔbarima a, ne ho rentew nnanson, te sɛ bere a wayɛ bra a ne ho ntew no ara.+ 3 Ɛda a ɛto so awotwe no, ma wontwa abofra no twetia.*+ 4 Ma ɔntena fie nnafua 33 bio mfa ntew ne ho mfi ne mogya mu. Ɛnsɛ sɛ ɔde ne ho ka ade biara a ɛyɛ kronkron, na ɔrentumi mma baabi a ɛhɔ yɛ kronkron kosi sɛ nna a ɔde bedwira ne ho no bɛso. 5 “‘Sɛ ɔwo ɔbea a, ne ho rentew nnafua 14 te sɛ bere a wayɛ bra a ne ho ntew no ara. Ɛsɛ sɛ ɔtena fie nnafua 66 bio de tew ne ho fi ne mogya mu. 6 Sɛ ɔwo ɔbarima anaa ɔbea na sɛ nna a ɔde bedwira ne ho no ba awiei a, ɔde odwennini kumaa a wadi afe bɛbrɛ ɔsɔfo no ma ɔde abɔ ɔhyew afɔre+ ama no, na ɔde aborɔnoma ba anaa aburuburuw nso bɛba ama ɔde abɔ bɔne ho afɔre; ɔde eyinom nyinaa bɛbrɛ no wɔ ahyiae ntamadan no kwan ano. 7 Ɔsɔfo no de bɛba Yehowa anim na ɔde apata ama ɔbea no, na ne ho atew wɔ ne mogya mu. Eyi ne mmara a ɛwɔ hɔ ma ɔbea a ɔbɛwo ɔbarima anaa ɔbea no. 8 Na sɛ ne nsa anso oguan so a, ɛnde ɔmfa mmuruburuw abien anaa mmorɔnoma mma abien+ mmra, na wɔmfa baako mmɔ ɔhyew afɔre na wɔmfa baako nso mmɔ bɔne ho afɔre, na ɔsɔfo no mfa mpata mma no, sɛnea ɛbɛyɛ a ne ho bɛtew.’”
^ Anaa “fa afuru.”
^ Anaa “wontwa abofra no dua.”